Isifundo se-Imbangela Yokucindezeleka
Amathuluzi ongawasebenzisa ukusiza ukukhulula umthwalo womunye wokucindezeleka, ukuze baphile kahle futhi bajabule futhi.
Kungani abanye abantu begula kaningi kunabanye? Kungani ezinye zezingozi? Futhi ngabe kunesizathu sokuthi abanye baphile izimpilo zabo ngonyawo lomzwelo, benza kahle ngolunye usuku futhi kabi kulandelayo?
Kukhona incazelo, futhi akuhlangene nakancane nonkulunkulu, ikusasa noma isikhundla sezinkanyezi. Eqinisweni, isizathu sangempela esenza lezi zinto kanye nokuxazululwa kwazo sichazwe kwi-Scientology.
U-L. Ron Hubbard ukwazile ukubona ngobunzima bokuziphatha komuntu futhi wathola nezimbangela ezichaza isimo se- ukucindezela kubantu—ngoba ukucindezelwa ngabanye okudala lemicimbi ebonakala iyingozi. Ezicashunweni zemibhalo yakhe kulesi sifundo, uzothola ukuthi ungababona kanjani abantu abakufisela okubi kanye nalabo okufanele babe ngabangani bakho. Uzothola ukuthi kungani abanye abantu benza kabi empilweni nokuthi ungabasiza kanjani ukuthi baphinde bathole inhlalakahle yabo. Uzofunda ngemishini ngemuva kwalesi simo esilimazayo kodwa esijwayelekile nezindlela zokulwa naso. Yidatha engashintsha impilo yakho ngokusobala nangaso leso sikhathi, njengoba nje iguqule izimpilo zabanye.
Incwajana Imbangela Yokucindezeleka
Lapho sekuqediwe Isifundo se-Imbangela Yokucindezeleka, uzothola isitifiketi nge-email.
“Kulesi sifundo, ngithole imininingwane ebaluleke kakhulu yokuthi ngithatha kanjani izinqumo mayelana nokuthi ngisebenza nobani, obani okufanele babe ngabangani bami futhi okubaluleke kakhulu ukuthi ngibaphatha kanjani labo abazama ukucindezela abanye.
“Ngabona ukuthi isimo esiyinhlekelele kangaka empilweni yomuntu singenziwa sibengcono kangaka ngalolu lwazi. Ngemuva kokuthi ngiphathe udadewethu ngencwajana, ngabona impilo yakhe iguquka ngobusuku obubodwa. Kuyamangalisa! Ukubonga kwami kumphathi wesifundo sami naku-L. Ron Hubbard.”
“Ngesikhathi ngiqala lesi sifundo, bengingazi lutho ngokucindezela, izimbangela zakho, noma imithombo yakho. Kwangimangaza impela ukuthi konke kwaba nengqondo kimi ngokushesha!
“Ngifunde kahle incwajana ethi i-The Cause of Suppression. Lapho sengiqedile, ngakwazi ukubona izimbangela zokucindezelwa empilweni yami kalula. Ngibonile izinzuzo zingakapheli izinsuku, ngisho namahora! Angibange ngisazizwa ngisindwa noma ngizibambekike. Ngazizwa ngingcono ngokomzimba nangokwengqondo, futhi ngezwa ukuthi ngifunde okuthile okungangisiza kakhulu impilo yami yonke.
“Kodwa akugcinanga lapho. Lesi sifundo asisizanga nje kuphela ukuzisiza, kodwa sangisiza ngokuthi ngisize abanye. Ukuze ngiqedele izabelo okwenziwayo, bekufanele ngifunde abanye abantu endaweni engikuyo, ngithole izinhlobo ezahlukahlukene zobuntu nezenzo zokucindezela.
“Kodwa-ke, kunokuba ngikuyeke kuqhubeke, sengingabasiza manje ukuthi bakumise noma basuke kukho, noma baqhubekele phambili. Lokhu kwakuyiqiniso ikakhulukazi endabeni yomngane wami owayecindezelwa iminyaka. Wayehlala ezizwa engaphilile noma engakhululekile. Wayehlala ecindezelekile futhi ehlushwa imikhuhlane namakhaza njalo. Lapho ezwa ukuthi uyacindezelwa, waqala ukuqonda futhi wazizwa engcono cishe ngokushesha. Futhi waba ngcono nakakhulu njengoba isikhathi sihamba! Wayengakholwa neze, kwakungakholeki!
“Ulwazi engiluthole kulesi sifundo alufani nolunye. Ngiwusebenzisele ukuzuzisa mina nabanye, ngezindlela eziningi. Impilo yami ithuthuke okungenani kayishumi! Ngizizwa ngijabule. Nginomuzwa wokuthi ngingenza noma yini, ngoba akekho ongangibamba noma azame ukungitshela okunye! Futhi ngingasiza nabangane bami nomndeni wami ukuba bazizwe ngendlela efanayo!”